Tsarasaotra Soavimasoandro : Nalaina jiolahy fito lahy an-keriny i Moustafa Haridjee -
AccueilSongandinaTsarasaotra Soavimasoandro : Nalaina jiolahy fito lahy an-keriny i Moustafa Haridjee
Tsarasaotra Soavimasoandro : Nalaina jiolahy fito lahy an-keriny i Moustafa Haridjee
Lehilahy teratany karana , tale jeneraly ao amin’ny orinasa Viséo, antsoina hoe Moustafa Haridjee no nalaina jiolahy miisa fito nisaron-tava sy nirongo basy kalaky an-keriny teny amin’ny tetezan’i Tsarasaotra Soavimasoandro akaikin’ny orinasa Bazar auto omaly tokony ho tamin’ny 05 ora sy sasany hariva. Araka ny angom-baovao, dia nandeha fiara 4×4 Mazda ity mpandraharaha karana ity sy ny mpamiliny no nodonin’ny fiara Citroën Smaltine miloko mavo nentin’ireo mpanao kidnapping. “Nitoriana ny fiaran’ireo mpaka an-keriny ary nidona tamin’io 4×4 Mazda avy any Ambohimanarina io. Nivoaka avy hatrany ireo jiolahy fitolahy nitondra kalaky sy nanafina endrika ary nanambana basy ilay karana sy ny saoferany” hoy ny fanamarinam-baovao. Rehefa vita izany rehetra izany, dia navoakan’ireo olon-dratsy ilay mpamily raha toa ka nentin’ireto farany niaraka tamin’ny fiarany ilay karana, ary nihazo ny lalam-baovao izy ireo taorian’izay. Rehefa tonga teo amin’ny barazy be iray teo amin’iny lalan’ny frankofonia iny ihany anefa, dia efa nisy fiara iray hafa niandry indray ka nifindra tao anatin’izany ireo jiolahy sy ilay nalaina an-keriny, ary navelan’izy ireo teo indray io fiara tsy mataho-dalan’ilay karana io. Tsy hita intsony ny lalan’izy ireo taorian’izay.
Raha ny fantatra, dia avy niasa ary handeha hamonjy fodiana ity karana ity izao niharan-doza izao. Ankoatra ireo mpianatra nirava avy nianatra, dia isan’ny nanatri-maso ity tranga ity ihany koa ireo polisy nandrindra ny fifamoivoizana teny an-toerana, izay nampandre ny lehiben’izy ireo avy hatrany. Minitra vitsy taorian’izay, dia nigadona teo amin’ny “rond point” eo Tsarasaotra ny fiara 4×4 n’ireo mpitandro filaminana avy ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahavalo etsy Analamahitsy. Niezaka nanara-dia sy nanenjika ireo olon-dratsy ihany moa ireo polisy, saingy efa dify tsy hita intsony ireo jiolahy. Faninefany tamin’ireo mpandraharaha karana niharan’ity kidnapping ity tao anatin’ny tapa-bolana mahery kely izany i Moustafa Haridjee. I Navage Veldjee izay efa navotsotr’ireo jiolahy no lasibatra voalohany ny 24 mey lasa teo. Nanarakaraka azy ny 03 jona teo i Rishi Chandarana. Nalain’ireo jiolahy an-keriny tany Toamasina ny 08 jona ihany koa i Nizar Pirbhay ary ity niseho teny Tsarasaotra omaly ity ny farany. Manoloana ity asa ratsy ity izay nisesisesy tao ho ao sy ny mahakasika ny famonoana karana mpivady tany Antsiranana , ny 03 jona lasa teo dia nanambara ny fianakaviamben’ny karana mizaka ny zom-pirenena frantsay eto Madagasikara na ny Cfoim fa tsy hilavo lefona amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny resaka fakana an-keriny eto an-toerana.
Voahaja ny didin’ny Hcc : Nahazo seza avokoa ny Tim sy ny Mapar
Omaly ny fe-potoana farany nodidian’ny fanapahana navoakan’ny Hcc fa hamoahana ny lisitry ny mpikambana ao anaty governemantan’ny fisokafana. Ny fotokevitra amin’izany moa dia ny hoe governemanta handraisan’ny rehetra anjara. Hita taratra tokoa izany raha mijery ...Tohiny